Hwehwɛ Ahonyade a Ɛnsɛe Da​—Luka 16:⁠9 | Adesua
“Momfa ahonyade a ɛnteɛ so nnya nnamfo.”​—LUKA 16:9.
NNWOM: 32, 154
Yɛne Onyankopɔn adamfofa no, yɛbɛyɛ dɛn de honam fam nneɛma ahyɛ mu den?
Wiase aguadi a ɛrekɔ so nnɛ no, dɛn na yɛbɛyɛ na amfa yɛn anyɛ nkoa?
Adɛn nti na woasi wo bo sɛ wobɛhwehwɛ honhom fam ahonyade?
1, 2. Wiase yi mu deɛ, ohia ase rentu da. Adɛn ntia?
ƐNNƐ, wiase sikasɛm nkɔ yiye koraa. Mmerante ne mmabaa repɛ adwuma denneennen nanso wonnya bi. Nnipa pii de wɔn nkwa to asiane mu tu kwan kɔ aman a wodi yiye so. Ohia atu atese wɔ aman a wodi yiye mpo so. Di ara na asikafo redi yiye, na ahiafo nso, hia araa na ɛrehia wɔn. Nhwehwɛmu a wɔayɛ nnansa yi ara kyerɛ sɛ, wiase nyinaa yɛfa nnipa ɔha biara a, emu baako a ɔwɔ sika paa no, yɛka 99 a aka no deɛ bom a na ɛne ne deɛ bɛyɛ pɛ. Ɛwom, yɛrentumi nkyerɛ sɛ saa na ɛte. Nanso obiara gye tom sɛ bere a nnipa ɔpepepem pii di hia buruburoo no, ebinom nso ahyɛ ada so araa ma sika a wɔwɔ no, wobedi ama wɔn nanankansowanom mpo abedi bi. Yesu kaa ɔhaw yi ho asɛm sɛ: “Ahiafo de, daa wɔwɔ mo nkyɛn.” (Mar. 14:7) Adɛn nti na ebi te yiye na ebi nte yiye koraa?
2 Yesu hui sɛ enkosi sɛ Onyankopɔn Ahenni bɛba no, wiase sikasɛm bɛkɔ so asɛe. Adiyisɛm 18:3 ka “aguadifo” anaa aguadifo adifudepɛfo ho asɛm. Wɔne amammui nhyehyɛe ne nyamesom ahyehyɛde ahorow no na ɛka bom yɛ Satan wiase no. Onyankopɔn asomfo tumi twe wɔn ho koraa fi amanyɔsɛm ne atoro som ho. Nanso Satan wiase no fã a ɛne aguadi nhyehyɛe no deɛ, ɛyɛ den ma wɔn mu pii sɛ wɔbɛtwe wɔn ho afi ho koraa.
3 Sɛ́ Kristofo no, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ sɛ adwene a yɛwɔ wɔ wiase yi aguadi ho no fata anaa. Yebetumi abisa yɛn ho sɛ: ‘Mɛyɛ dɛn de honam fam nneɛma a mewɔ no adi Onyankopɔn nokware? Dɛn na mɛyɛ na mamfa me ho anhyɛ wiase aguadi mu fee? Nhwɛso bɛn na ɛma yehu sɛ mmere a emu yɛ den yi mu mpo, Onyankopɔn nkurɔfo de wɔn ho to ne so koraa?’
OFIEHWƐFO BI A WANYƐ NEA ƐTEƐ
4, 5. (a) Dɛn na ɛtoo ofiehwɛfo a Yesu kaa ne ho asɛm wɔ ne mfatoho mu no? (b) Afotu bɛn na Yesu de maa n’akyidifo?
4 Kenkan Luka 16:1-9. Yesu mfatoho a ɛfa ofiehwɛfo a wanyɛ nea ɛteɛ ho no, ɛsɛ sɛ ɛboa yɛn ma yɛfa adwene. Wɔbɔɔ ofiehwɛfo no sobo sɛ ɔyɛ ne wura agyapade basabasa. Ɛbaa saa no, ɔde “n’adwene yɛɛ adwuma” sɛnea ɛbɛyɛ a ‘obenya nnamfo’ a wɔbɛboa no bere a n’adwuma no afi ne nsa. * Ɛnyɛ nea na Yesu reka ne sɛ n’asuafo no nyɛ nneɛma a ɛnteɛ na ama wɔatumi atena wiase yi mu. Yesu kae sɛ “wiase nhyehyɛe yi mma” na wɔda suban a ɛte saa adi. Nanso, na Yesu pɛ sɛ ɔde mfatoho no kyerɛ yɛn asuade bi.
5 Sɛnea ofiehwɛfo no kɔɔ ahokyere mu mpofirim no, na Yesu nim sɛ sɛ n’akyidifo nso repɛ wɔn ano aduan wɔ wiase bɔne yi mu a, wɔn ho betumi akyere wɔn. Enti otuu wɔn fo sɛ: ‘Momfa ahonyade a ɛnteɛ so nnya nnamfo, na sɛ ɛsa a, Yehowa ne Yesu agye mo akɔ daa tenabea.’ Dɛn na yebetumi asua afi Yesu afotu yi mu?
6. Aguadi nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ nnɛ no, yɛyɛ dɛn hu sɛ na ɛnka Onyankopɔn atirimpɔw ho?
6 Yesu ankyerɛ nea enti a ɔkae sɛ ahonyade ‘nteɛ.’ Nanso Bible ma yehu sɛ aguadi deɛ na ɛnka Onyankopɔn atirimpɔw ho. Yehowa maa Adam ne Hawa nea wohia ma ebuu so wɔ Eden. (Gen. 2:15, 16) Asomafo no bere so nso, Onyankopɔn honhom kronkron hyɛɛ Kristofo a wɔasra wɔn no mã, “na wɔn mu biako mpo anka sɛ biribi a ɔwɔ no yɛ n’ankasa de; na mmom biribiara a wɔwɔ yɛ kwasafode.” (Aso. 4:32) Odiyifo Yesaia kae sɛ nneɛma a ɛwɔ asase so no, bere bi bɛba a obiara benya bi kwa. (Yes. 25:6-9; 65:21, 22) Enkosi saa bere no, ehia sɛ Yesu akyidifo ‘de wɔn adwene yɛ adwuma’ de hwɛ wɔn ho. Bere a wɔde wiase yi mu “ahonyade a ɛnteɛ” no redi dwuma no, ɛsɛ sɛ wɔkɔ so yɛ Onyankopɔn apɛde.
FA AHONYADE A ƐNTEƐ DI DWUMA NYANSAM
7. Afotu bɛn na ɛwɔ Luka 16:10-13?
7 Kenkan Luka 16:10-13. Ofiehwɛfo a Yesu kaa ne ho asɛm no pɛɛ nnamfo a wobetumi aboa no. Nanso, Yesu anka sɛ n’akyidifo nhwehwɛ nnamfo wɔ soro mfa mpɛ wɔn ankasa mfaso. Nsɛm a Yesu ka kaa ho no ma yehu sɛ na ɔpɛ sɛ yɛde “ahonyade a ɛnteɛ” no di Onyankopɔn nokware. Nea na Yesu reka ne sɛ, sɛ yɛwɔ ahonyade a ɛnteɛ a, nea yɛde bɛyɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ ‘yedi nokware’ anaa yenni nokware. Yɛbɛyɛ dɛn de ahonyade a ɛnteɛ no adi Onyankopɔn nokware?
8, 9. Ma nhwɛso fa kyerɛ sɛnea ebinom de wɔn ahonyade redi Onyankopɔn nokware.
8 Ɔkwan baako bi wɔ hɔ a yebetumi afa so akyerɛ sɛ yɛde yɛn ahonyade redi Onyankopɔn nokware. Ɛne sɛ yebeyi sika de aboa wiase nyinaa asɛnka adwuma a Yesu kaa ho asɛm no. (Mat. 24:14) Ná abeawa bi a ɔwɔ India wɔ sika adaka ketewa bi a ɔde coins sie mu. Sika a anka obetumi de atɔ abaduaba mpo, ɔde guu adaka no mu. Adaka no yɛɛ ma no, ɔde sika no mae sɛ wɔmfa mmoa asɛnka adwuma no. Onua bi a ɔwɔ India nso wɔ kubefuw. Ɔde kube pii kɔmaa anuanom a wɔkyerɛ nhoma ase kɔ Malayalam kasa mu no. Onim sɛ anuanom no tɔ kube, enti sɛ ɔde bi kɔma wɔn a, wɔrenyi sika ntɔ bi. Ohui sɛ kube no bɛboa wɔn sen sɛ anka obeyi sika. Ɛno kyerɛ sɛ “ɔde n’adwene yɛɛ adwuma.” Anuanom a wɔwɔ Greece nso taa de ngodua ngo, kyiis, ne nnuan foforo kɔma Betel abusua no.
9 Onua bi a ofi Sri Lanka wɔ amannɔne. Nanso ɔde ne fie ne n’asase a ɛwɔ ne kurom ama anuanom sɛ wɔmfa nyɛ asafo nhyiam ne ɔmansin nhyiam. Anuanom a wɔyɛ bere nyinaa som adwuma no bi nso te ne fie hɔ. N’agyapade no, sɛ ɔde repɛ sika a, anka obenya bi paa. Nanso, ɔde ne nyinaa abɔ afɔre. Wei aboa adawurubɔfo a wɔwɔ hɔ a wɔn nsam nni bi no. Ɔman foforo bi nso, wɔabara Yehowa Adansefo som adwuma no wɔ hɔ. Anuanom a wɔwɔ hɔ no bi ama wɔde wɔn fie ayɛ Ahenni Asa. Ɛno ama akwampaefo ne afoforo pii a wonni sika anya baabi a wohyiam. Wei mfa sikasɛm ho dadwen mmɛto wɔn so.
10. Sɛ yebue yɛn nsam kyɛ ade a, nhyira a yenya no bi ne sɛn?
10 Nhwɛso ahorow yi ama yɛahu sɛ Onyankopɔn nkurɔfo ‘di ade ketewa mu nokware’ efisɛ wɔde honam fam ahonyade a ɛnsom bo papa no boa afoforo. (Luka 16:10) Yehowa nnamfo a wɔde nneɛma bɔɔ afɔre saa no, wɔte nka sɛn? Wonim sɛ, sɛ wobue wɔn nsam kyɛ ade a, ɛbɛma wɔanya “nokware” ahonyade, anaa ahonyade a ɛnsɛe da. (Luka 16:11) Onuawa bi taa yi ntoboa de boa Ahenni adwuma no. Ɔkaa nhyira bi a wanya ho asɛm sɛ: “Mfe pii ni, mahu sɛ, sɛ mibue me nsam ma afoforo a, ɛma minya atenka soronko. Mahu sɛ, sɛ mibue me nsam ma afoforo a, ɛma me ne wɔn tena fɛfɛɛfɛ. Ɛma mitumi de afoforo mfomso kyɛ wɔn, na minya afoforo ho abotare. Afei sɛ nneɛma ankɔ yiye anaa wɔde afotu bi ma me a, ɛnhaw me pii.” Nnipa pii abehu sɛ, sɛ wobue wɔn nsam kyɛ ade a, ɛma wonya nhyira pii.​—Dw. 112:5; Mmeb. 22:9.
11. (a) Sɛ yebue yɛn nsam kyɛ ade a, ɛkyerɛ sɛ ‘yɛde yɛn adwene yɛ adwuma.’ Adɛn ntia? (b) Sɛn na Onyankopɔn nkurɔfo sika kyɛ pɛ? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
11 Sɛ yɛde yɛn honam fam nneɛma boa Ahenni adwuma no a, ɛkyerɛ sɛ ‘yɛde yɛn adwene yɛ adwuma.’ Yɛyɛ saa a, tebea biara a yɛwom no, yebetumi aboa afoforo. Ebinom wɔ ahonyade nanso wontumi nyɛ bere nyinaa som adwuma no bi anaa wontu nkɔ amannɔne. Ne nyinaa mu no, ɛyɛ wɔn dɛ sɛ wɔde ntoboa a woyi no boa afoforo ma wɔyɛ ɔsom adwuma no. (Mmeb. 19:17) Mmeae bi wɔ hɔ a, nnipa pii reba nokware no mu nanso nnipa a ɛwɔ hɔ di hia. Ntoboa a yefi yɛn pɛ mu yi no boa ma yetumi de nhoma kɔma wɔn, na ɛboa ma yɛyɛ asɛnka adwuma no wɔ hɔ. Mfe bi a abɛsen kɔ no, na aman bi te sɛ Democratic Republic of Congo, Madagascar, ne Rwanda sei, gye sɛ obi yɛ adwuma bɛyɛ nnawɔtwe anaa bosome ansa na watumi atɔ Bible. Enti sɛ anuanom pɛ sɛ wɔtɔ Bible a, na ɛkyerɛ sɛ wɔn mmusua bɛda kɔm. Nanso seesei esiane sɛ nnipa pii yi ntoboa na sika no “akyɛ pɛ” nti, Yehowa ahyehyɛde no ahwɛ ama wɔakyerɛ Bible no ase akyekyɛ ama abusua muni biara. Wɔakyekyɛ bi nso ama Bible asuafo a wɔpɛ sɛ wohu nokware no. (Kenkan 2 Korintofo 8:13-15.) Enti, wɔn a woyi ntoboa ne wɔn a wonya so mfaso nyinaa betumi abɛyɛ Yehowa nnamfo.
MFA WO HO ‘NHYƐ AGUADISƐM MU’ FEE
12. Dɛn na Abraham yɛ de kyerɛe sɛ ɔwɔ Onyankopɔn mu ahotoso?
12 Sɛ yɛamfa yɛn ho anhyɛ wiase yi aguadi mu fee na yɛhwehwɛ ahonyade a ɛnsɛe da a, ɛno nso betumi ama yɛabɛyɛ Yehowa nnamfo. Ná Abraham wɔ gyidi kɛse. Otiee Yehowa tu fii Ur kurow a edi yiye no mu kɔtenaa ntamadan mu. Ɔyɛɛ wei sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛkɔ so ayɛ Yehowa adamfo. (Heb. 11:8-10) Ɔde ne ho too Onyankopɔn so mmom sen sɛ ɔbɛhwehwɛ honam fam nneɛma, efisɛ na ogye di sɛ Onyankopɔn na obetumi ama yɛanya ahonyade a ɛnsɛe da. (Gen. 14:22, 23) Yesu hyɛɛ afoforo nkuran sɛ wonnya gyidi a ɛte saa. Ɔka kyerɛɛ aberante bi a ɔwɔ agyapade bebree sɛ: “Sɛ wopɛ sɛ woyɛ pɛ a, kɔtɔn w’ahode fa ma ahiafo na wubenya ademude wɔ soro, na bra bedi m’akyi.” (Mat. 19:21) Ná saa aberante no nni Abraham gyidi no bi. Nanso ebinom kyerɛe sɛ wɔwɔ Onyankopɔn mu ahotoso paa.
13. (a) Afotu bɛn na Paulo de maa Timoteo? (b) Yɛbɛyɛ dɛn de Paulo afotu no ayɛ adwuma nnɛ?
13 Ná Timoteo gyidi sõ. Paulo frɛɛ Timoteo “Kristo Yesu sraani pa.” Ɛno akyi, ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Obiara nni hɔ a ɔreyɛ asraafodwuma a ɔde ne ho hyehyɛ aguadisɛm mu, efisɛ ɔpɛ sɛ ɔsɔ nea ɔfaa no sraadi mu no ani.” (2 Tim. 2:3, 4) Ɛnnɛ, Yesu akyidifo yɛ nea wobetumi biara de Paulo afotu no yɛ adwuma. Wɔn mu bɛyɛ ɔpepem baako a wɔyɛ bere nyinaa som adwuma no te sɛ asraafodɔm. Wɔkae nnyinasosɛm yi: “Nea ogye obi hɔ bosea no yɛ akoa ma nea ɔbɔ no bosea no.” Enti wɔyere wɔn ho sɛnea ɛbɛyɛ a aguadi ho dawurubɔ ne wiase a wɔte mu no ntwetwe wɔn. (Mmeb. 22:7) Nea anka Satan pɛ ara ne sɛ yɛde yɛn bere ne yɛn ahoɔden nyinaa bɛhyɛ wiase aguadi mu fee. Gyinae bi wɔ hɔ a, sɛ obi si a ebetumi ama ɛka amene no mfe pii. Ebinom gye bosea kɛse de tɔ fie. Afoforo nso gye bosea de kɔ sukuu, na ebinom nso kogye bosea de tɔ kar a ne bo yɛ den. Ebinom nso wɔ hɔ a, wotumi kɔbɔ bosea de yɛ ayeforo kɛse. Ɛba saa a, daa na wɔreyɛ adwuma de ako wɔn ka. Sɛ yegyae boseabɔ ne atotɔatotɔ, na yɛyɛ yɛn ho awiɛmfoɔ a, ɛkyerɛ sɛ ‘yɛde yɛn adwene yɛ adwuma.’ Wei bɛboa yɛn ama yɛasom Onyankopɔn na yɛanyɛ nkoa amma ɛnnɛ wiase yi aguadi nhyehyɛe no.​—1 Tim. 6:10.
14. Dɛn na ɛsɛ sɛ yesi yɛn bo sɛ yɛbɛyɛ? Ma ɛho nhwɛso.
14 Sɛ yebetumi ayɛ yɛn ho awiɛmfoɔ a, ɛsɛ sɛ yɛde nneɛma a ɛho hia paa di kan wɔ yɛn asetenam. Ná awarefo bi wɔ adwuma kɛse bi a ɛrenya nkɔso. Ná wɔayɛ bere nyinaa som adwuma no pɛn, na na wɔpɛ sɛ wɔsan yɛ bio. Enti wɔtɔn wɔn adwuma no. Suhyɛn ne nneɛma foforo a wɔwɔ nso, wɔtɔn ne nyinaa. Afei wotuu wɔn ho mae kɔboa ma wosii wiase nyinaa adwumayɛbea ti a ɛwɔ Warwick, New York no. Nhyira soronko bi a wonyae ne sɛ, wɔkɔkaa wɔn babea ne ne kunu a wɔsom wɔ Betel no ho ma wɔyɛɛ adwuma. Awarefo no nyaa hokwan nso ne ɔbarima no awofo boom yɛɛ adwuma wɔ Warwick. Onuawa kwampaefo bi a ɔwɔ Colorado, U.S.A. nyaa adwuma wɔ sikakorabea. Ná ɛnyɛ ne bere nyinaa na ɔde yɛ adwuma no. Nanso na n’adwuma ho twa, enti na obiara pɛ n’asɛm paa. Ná wɔpɛ sɛ wɔbɔ n’aba so ma ɔde ne bere nyinaa yɛ adwuma no. Akatua a na ogye nso, na wɔbɛbɔ ho mmiɛnsa. Nanso onuawa no hui sɛ, sɛ ɔpene so yɛ adwuma no a, ɔrennya bere pii nyɛ ɔsom adwuma no. Enti hokwan a na ɛbɛma wanya sika pii no, ɔpowee. Yehowa asomfo a wɔde nneɛma pii abɔ afɔre no, wɔn mu kakraa bi na yɛaka wɔn ho asɛm yi. Yɛn nso, ɛsɛ sɛ yesi yɛn bo sɛ yɛde Ahenni nneɛma bedi kan wɔ yɛn asetenam. Yɛyɛ saa a, ɛbɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn adamfofa ne honhom fam ahonyade ho hia yɛn sen nneɛma a yebetumi anya afi wiase aguadi mu.
BERE A HONAM FAM AHONYADE ASA
15. Ahonyade bɛn na ɛma yenya akomatɔyam paa?
15 Sɛ obi yɛ ɔdefo a, ɛno ara nkyerɛ sɛ Onyankopɔn ahyira no. Wɔn a wɔyɛ “adefo nnwuma pa mu” no na Yehowa hyira wɔn. (Kenkan 1 Timoteo 6:17-19.) Nhwɛso bi ni. Lucia * tee sɛ wohia asɛmpakafo wɔ Albania, enti afe 1993 no otu fii Italy kɔɔ Albania. Ná onni adwuma biara a ɔbɛyɛ de ahwɛ ne ho nanso na onim sɛ Yehowa bɛboa no. Osuaa Albania kasa, na yɛrekasa yi waboa nnipa bɛboro 60 ma wɔabɔ asu. Ɛwom, Onyankopɔn nkurɔfo dodow no ara nka asɛmpa no wɔ mmeae a nkurɔfo ani gye asɛm no ho saa. Nanso biribiara a yɛbɛyɛ ama nkurɔfo ahu ɔkwan a ɛkɔ daa nkwa mu na wɔanantew so no, ɛbɛyɛ biribi a yɛne wɔn nyinaa werɛ remfi da.​—Mat. 6:20.
16. (a) Dɛn na ɛbɛto aguadi nhyehyɛe a ɛwɔ hɔ nnɛ no? (b) Esiane sɛ yenim nea ebesi daakye nti, adwene bɛn na ɛsɛ sɛ yenya wɔ honam fam nneɛma ho?
16 Yesu kae sɛ, “sɛ [ahonyade a ɛnteɛ no sa] a.” (Luka 16:9) Wei kyerɛ sɛ, ke ara ne ke, saa ahonyade no bɛsa. Nna a edi akyiri yi mu no, sikakorabea binom agu, na aman bi nso sikasɛm ayɛ basaa. Nanso, ɛrenkyɛ nea ebesi wɔ wiase nyinaa no bɛkyɛn koraa. Ɛdan sɛ boɔ a, Satan wiase no nyinaa bɛsɛe. Amammui nhyehyɛe oo, nyamesom ahyehyɛde oo, aguadi nhyehyɛe oo, ne nyinaa bɛsɛe. Efi teteete nyinaa, sika ne dwetɛ na nkurɔfo de di gua. Yehowa adiyifo Hesekiel ne Sefania ka too hɔ sɛ saa nneɛma no so remma mfaso biara. (Hes. 7:19; Sef. 1:18) Sɛ aka kakra ama yɛawu, na yehu sɛ yɛabiri yɛn mogya ani apɛ “ahonyade a ɛnteɛ” pii agu hɔ nanso yenni ahonyade a ɛnsɛe da a, yɛbɛte nka sɛn? Ɛbɛyɛ sɛ ɔbarima bi a ɔyɛɛ adwuma ne nkwa nna nyinaa de boaboaa sika ano guu hɔ, nanso ewiee ase no sɛɛ na sika a waboaboa ano no nyinaa yɛ daadaakra anaa sika bɔne. (Mmeb. 18:11) Nokwasɛm ne sɛ, nea ebesi biara, “ahonyade a ɛnteɛ” no bɛsa. Enti hokwan a woanya sɛ wode ‘bɛfa nnamfo’ wɔ soro no, mma ɛmmɔ wo. Biribiara a yɛbɛyɛ ama Yehowa Ahenni no anya nkɔso no bɛma yɛayɛ adefo wɔ honhom fam.
17, 18. Dɛn na Onyankopɔn nnamfo benya daakye?
17 Sɛ Onyankopɔn Ahenni no ba a, yɛrentua dan ka, na yɛremmɔ bosea ntɔ fie bio. Aduan bebu so, na obiara benya bi kwa. Yɛrennom aduru bio, na yɛremmɔ ka wɔ ayaresa ho. Nneɛma a ɛyɛ papa paa wɔ asase so no, Yehowa nkurɔfo nsa bɛka ne nyinaa. Yɛremfa sika kɔkɔɔ, dwetɛ, anaa aboɔden abo nni gua bio. Mmom, yɛde besiesie yɛn ho. Yebenya nnua, abo, ne dade a ɛyɛ papa paa de asisi adan a ɛyɛ fɛ. Yɛrentew sika ntɔ emu biara. Yɛresisi adan no nso a, yɛn nnamfo de anigye ne ahosɛpɛw bɛboa yɛn a wɔrennye sika. Nnepa a ɛwɔ asase so no, wɔbɛkyɛ ama obiara anya bi.
18 Agyapade a ɛsom bo sei na wɔn a wɔfa nnamfo wɔ soro no benya. Nanso ɛnyɛ ɛno nko ara. Sɛ Yehowa asomfo a wɔwɔ asase so nyinaa te Yesu nsɛm yi a, wɔn ani begye aboro so. Ɔbɛka akyerɛ wɔn sɛ: “Mommra, mo a m’Agya ahyira mo, momfa ahenni a wɔasiesie ama mo fi wiase nhyɛase no nni.”​—Mat. 25:34.
^ nky. 4 Yesu ankyerɛ sɛ sobo a wɔbɔɔ ofiehwɛfo no yɛ nokware anaa ɛnyɛ nokware. Luka 16:1 ka sɛ ‘wɔkaa ofiehwɛfo no ho asɛm kyerɛɛ’ ne wura. Hela asɛmfua a wɔde dii dwuma no betumi akyerɛ sɛ wotwaa asɛm too ne so. Nea Yesu twee adwene sii so ne sɛnea ofiehwɛfo no yɛɛ n’ade, ɛnyɛ nea enti a wogyee n’adwuma fii ne nsam.
^ nky. 15 Lucia Moussanett asetenam nsɛm wɔ July 8, 2003, Nyan!, kr. 28-32.
SƐNEA WUBEYI NTOBOA WƆ INTANƐT SO
Bible nkyerɛkyerɛ adwuma ne adɔe a yɛyɛ nkurɔfo wɔ wiase nyinaa no, nkurɔfo fi wɔn pɛ mu yi ntoboa de boa. Sɛ wopɛ sɛ wuyi ntoboa wɔ Intanɛt so a, yɛsrɛ wo, kɔ www.jw.org/tw na hwɛ ase hɔ. Kliki ɔfã a wɔato din “Make a Donation to Our Worldwide Work.”